VaMnangagwa Vanoparura Zviri Pamutemo Congress yeZanu PF
Zvita 15, 2017
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nemudzimai wavo, Amai Auxilia Mnangagwa
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vaparura zviri pamutemo musangano wechimbi-chimbi webato riri kutonga reZanu PF uyo uri pakati izvozvi muHarare vachishoropodza chikwata cheG40 nekukanganisa kugadzikana kwebato.
VaMnangagwa havana kuita tsika yevaive mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe yekushoropodza bato rinopikisa reMDC pamwe nenyika dzekumawirira.
Vachitaura kuvatsigiri vebato ravo, VaMnangagwa vavimbisawo kuti sarudzo dzichaitwa gore rinouya dzichange dzakachena, uye dzichaitwa munguva yakatarwa.
Varumbidzawo mukuru wemauto, VaConstantino Chiwenga nekutungamira chirongwa chekugadzirisa bato cheOperationRestore Legacy, vakashoropodzawo vafungidzirwa kuti ndiMai Grace Mugabe, kunyange vasina zvavo kuvataura nezita, vachiti vaigaro vatuka pamisangano yevechidiki yaipindwa naVaMugabe nemudzimai wavo, vachiti kumisangano iyi kwainzi ivo VaMnangagwa vapwanyiwe musoro.
Vatiwo vachanyevenutsa mitemo inobata mararamiro engochani, vakawedzera vachiti vanoda kuumba nyika isina rusarura pachitariswa kwakarerekera munhu munyaya dzepabonde
VaMnangagwa vari kutarisirwa kudomwa zviri pamutemo semutungamiriri webato reZanu PF pamwe nekuti ndivo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rinouuya.
Kana vakanga vatambira kudomwa kwavo, vari kutarisirwawo kuzodoma vatevedzeri vavo vaviri, mumwe wacho ari munhukadzi, zita raaAmai Oppah Muchinguri richikandwa munguvani vachinzi nemadzimai eZanu PF ndivo vakakodzera kuti vatore chigaro chemumwe mutevedzeri vemutungamiri webato.
Musangano uyu watanga VaMnangagwa nemudzimai vawo vachisima muti paRobert Mugabe Square apo pari kuitirwa musangano uyu.
Sachigaro wevakarwa hondo yerusununguko, VaChristopher Mutsvangwa, vanoti zvinofadza kuti musangano uyu unoitika apo Zimbabwe yakasununguka kubva kuhutongo hwehudzvanyiriri hwevaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe.
VaMutsvangwa vanoti vari kufadzwa chose nemufaro une vanhu vari kupinda mukongiresi.
Nhengo yedare reparamende zvakare vakarwawo hondo yerusununguko, VaJoseph Chinotimba, vanoti kongiresi iri kufamba zvakanaka asi havasi kufara nenyaya yekuti vemapato anopikisa vari kuramba vachikuridzira kuti nyika irambe yakatemerwa zvirango zvehupfumi.
VaChinotimba vaudzawo Studio 7 kuti vanotarisira kuti musangano uyu uchabuda nechisungo chinoomesera vanoita zvehuwori.
Musangano wanhasi wakange wakarongwa nevaimbove mutungamiriri wenyika VaRobert Mugabe vasati vadzingwa basa nemauto.